" Ukubhala kusebenza nje," u-Sinclair Lewis ushilo uthe "Akukho mfihlelo. Ukuba ulawule okanye usebenzise ipeni okanye uthayiphe okanye ubhale ngezwane zakho ezinzwane - kusekusebenza nje."
Mhlawumbi kunjalo. Kukho ke kufuneka kube nemfihlo yokubhala kakuhle - uhlobo lokubhala esinalo, khumbula, sifunde, kwaye uzame ukuxelisa. Nangona abalobi abaninzi bekulungele ukutyhila loo mfihlelo, kubonakala ngathi abavumi ukuba bayavumelana nantoni na.
Nazi ezi 10 zezo zinto ezingenjalo-eziyimfihlo ngokubhaliweyo okulungileyo.
Imfihlelo yazo zonke izibhengezo ezifanelekileyo isigwebo esifanelekileyo. ... Fumana amaqiniso ngokucacileyo kwaye amagama aya kulandela ngokwemvelo. (Horace, Ars Poetica , okanye i -Epistle kwi-Pisones , 18 BC)
Imfihlelo yokubhala kakuhle kukuthetha into endala ngendlela entsha okanye into entsha endala. (Igalelo kuRichard Harding Davis)
Imfihlelo yokubhala kakuhle ayikho kukhethwa kwamagama; kusetshenziswe kwamagama, ukudibanisa kwabo, ukungafani kwabo, ukuvisisana kwabo okanye ukuchasana, umyalelo wabo wokulandelana, umoya owenzayo. (John Burroughs, Field and Study , Houghton Mifflin, 1919)
Ukuze umntu abhale kakuhle, kukho izinto ezintathu ezifunekayo: ukufunda abalobi abangcono, ukugcina izithethi ezona zifanelekileyo, nokusebenzisa umzimba wakhe. (UBen Jonson, i- Timber, okanye i-Discoveries , 1640)
Imfihlo enkulu yokubhala ngokufanelekileyo kukukwazi ngokucacileyo oko kubhaliweyo malunga, kwaye angayi kuthinteka. (Alexander Pope, ocatshulwe ngumhleli uAW Ward kwi -Poetical Works ka-Alexander Pope , 1873)
Ukulungelelanisa amagunya okucinga kunye nokujika kolwimi kwisifundo, ukwenzela ukuba kukhuphe isiphetho esicacileyo sokuthi siya kutshintshwa kwinqanaba elikulo mbuzo, kwaye akukho nto enye, ingqinamba yokubhala. (Thomas Paine, ukuhlaziywa kuka-Abbé Raynal "I-Revolution yaseMelika," ecatshulwe nguMoncure uDaniel Conway kwiZibhalo zikaThomas Paine , ngo-1894)
Imfihlelo yokubhala kakuhle kukuhluba ngasinye isivakalisi kwizinto zayo ezicocekileyo. Yonke into engayisebenzisiyo, yonke igama elide elingaba lifutshane, zonke izibhengezo ezithatha intsingiselo efanayo esele isenzi kwisenzi , zonke izakhiwo ezingabonakaliyo ezishiya umfundi ukuba akaqinisekanga ukuba ngubani owenzayo - ezi ziwaka abaphangi abancinci abenza buthathaka amandla esivakalisi. (UWilliam Zinsser, ekubhaliseni kakuhle , Collins, 2006)
Khumbula umcebisi we-gonzo u-Hunter Thompson icebiso lokuba imfihlo yokubhala kakuhle ibhalwe kumanqaku amahle. Ziziphi iindonga? Ziziphi iintlobo zeefestile? Ngubani othethayo? Bathini na? (Kucatshulwe nguJulia Cameron kwi -Right to Write: Isimemo kunye nokuQala kwi-Life Life , iTarcher, ngo-1998)
Ukubhala okulungileyo kakhulu kubhala kwakhona . (kubelwe kwi-EB White)
[URobert] Southey wayehlala ephikelela kwimfundiso, eduduza abanye abalobi, ukuba imfihlo yokubhala kakuhle kukukhawuleza , icacile , kwaye icacile , kwaye ungacingi ngesimo sakho. (Ichazwe nguLeslie Stephens kwiStudies of Biographer , Vol. IV, 1907)
Indlela yokufaka ubungqina ngokuchanekileyo
Ababhali ekuBhaliweyo: Ukulwa noMlobi woBhala
Imfazwe Yehlabathi I: Ukucwina kweLusitania
Iingcali zeSayensi zeZikolo eziPhakamileyo
IiFilimu zeFrank Capra ze-Classic
Ukunyameka kusetyenziswa njani ngegrama
I-Indian Full Sound Anthem - Jana-gana-mana
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yokuqala yase-El Alamein
21 I-Big Digimon Anime Memes Ukwabelana Ngokufanelekileyo
I-Exonym and Endonym
Udliwano-ndlebe: Ubumnyama 'U-Justin Hawkins uthi Ukhangelelo olutsha' Aluyikuguquka '
I-Great Basin College Admissions